Taageerayaasha Inter Milan oo baraha bulshada baalasha uga tifay Nicola Rizzoli (Daawo sawirrada) – Gool FM
(Milano) 06 Jan 2017 – Kulankii xalay dhexmaray Inter iyo Juventus ayaa waloow uu ahaa kulan xiise badnaa misna waxaa la dhacay qisooyin dhowr ah oo dhakafaar u keenay taageerayaasha Inter Milan oo sheegay in rigoorayaal laga diidey.
Waxaa sidoo kale dhamaadkii ciyaarta kaadhka cas qaatay Ivan Perisic oo la sheegay inuu af xumeeyay garsoore Nicola Rizzoli oo lagu eedeeyo inuu si qarsoodi ah ugu hiilliyo Juventus, waxaa sidoo kale ganaax dhowr ciyaar ah halis ugu jira Icardi oo kubad ku laaday garsooraha oo la arkayay isagoo lahaa ”yaa soo laaday?” iyo xitaa Perisic.
Haddaba, taageerayaasha Inter Milan ayaa baraha bulshada baalasha uga tifay garsoore Rizzolli, mid baa soo qoray; ”Verrati hasoo iibsaninee Rizzolli keensada”, mid kale ayaa soo qoray ”Rigoore ma jiro marka aad joogto J Stadium”, mid kale ayaa soo qoray ”Zhang wuxuu soo iibsadey Gagliardini, halka Agneli uu uga jawaabey Rizzoli.
Anthony Martial oo ka hadlay wararka la xiriirinaya kooxda Paris Saint-Germain